भ्रष्टाचार विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	भ्रष्टाचार विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ ! » Nepal Fusion
भ्रष्टाचार विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ !
२०७६ जेष्ठ २१ गते मङ्गलवार
शान्तिको यात्राबाटै समृद्ध नेपाल
दिउँसोको मौसल कस्तो रहला, पक्कैपनि बिहानीले संकेत गर्छ । नेपाली उखानमा, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झै, यात्राबाट नै भबिस्यको आकलन गर्न सकिन्छ । चर्चा हिंसाको गरौं । नेपाली समाजमा किन दिनानुदिन हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचार बढिरहेका छन् । समयक्रम अनुसार समाजमा बौद्धिकता बढ्दै छ तरपनि हाम्रो समाज पुरानै बाटोमा हिडिरहेको छ ।
सत्ताको स्वादमा रमाएका केपि शर्मा ओली र प्रचण्डहरु हिंसाबाट नै जन्मिएका हुन् । उनीहरुको मूल कर्म भनेकै हिंसा थियो । ओलीले झापाबाट बिद्रोहको नाममा हत्या सुरु गरे । जनयुद्धको नाममा प्रचण्डले १७ हजार नेपाली नागरिकलाई अकालमै मृत्युको मुख पु¥याए । खै त आजपनि राजधानीमा बम पड्किएकै छन् । राजमार्गमा सवारी–साधनहरु जलेका जलिरहेका छन् । फेरि पनि प्रचण्डको क्रान्ति अपुरो भयो भन्दै बिप्लबहरुले नेपाली समाजमा आंतक मच्चाएकै छन् । अनि फेरि हिंसा जन्माउने काममा ओली, प्रचण्ड नै सक्रय छन् ।
तितो यर्थातता – ओलीले कहिल्यै शान्तिको बाटो चाहेन्न । शान्तिबाट पनि समाज परिवर्तन सकिन्छ भन्ने बौद्धिकता पलाएन । हुनत भन्ने गरिन्छ – ओली बर्षौ जेल बसे । उनको जल बसाँइले समृद्धिको कुनै भागमा टेवा पु¥याउदैन । उनको जेल अनुभब र प्रधानमन्त्रीको स्थानको कुनै लेखा जोखा हुदैन । संबिधानमा पनि यो छैन कि, जेल बसेकोले समृद्धि सल्क्कै ल्याछ । जो अपराधी हुन्छ, उसले सजाय भोग्छ अनि जेल बस्छ । यो थियो ओली हिडेको बाटो ।
प्रचण्डले हतियार उठाए । यो उनको मौलिक एजेण्डा थिएन । यो कार्ल, लेनिन र माओको सिको थियो । १७औं, १८औं सताब्दीका यी बिश्व कम्युनिष्टका नेताहरुको तुलता हुने महत्कांक्षाले २१औं सताब्दीमा प्रचण्डले बिस्तार बिकास र चेतनाको बाटोमा हिडेको नेपाली समाजका संरचना भत्काउदै हिडे । बिद्यालय पढ्दै गरेका बालबालिका देखि निर्दोष नागरिकलाई अचानो बनाउदै कुदे ।
बर्तमान अबस्थामा ओली र प्रचण्डले प्रयोग गर्ने शब्द शान्ति र समृद्धि । बल्ल आएर उनीहरुको घैटोमा घाम लाग्दैछ । पछिल्लो चरणमा आंतक मचचाउने दाउमा रहेको विप्लबलाई उनीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन भन्छ । हिंसाले परिवर्तन हुदैन भन्ने समेत उनीहरुको तर्क छ । यो यर्थात हो, हत्या, हिंसाले कहिल्यै पनि समाजको परिवर्तन हुदैन । कुरा प्रष्ट हुन्छ कि, ओली, प्रचण्ड हिडेको बाटो निहित स्वार्थका लागि थियो । उनीहरु आफैले महसुस गरिरहेका छन् कि, हाम्रो बाटो गलत थियो र हो ।
पछिल्लो चरणमा नेपाली समाजले परिर्वतनमा अपेक्षा गरेका पात्र हुन् रबीन्द्र मिश्र । उनको मुल उदेश्य भनेकै शान्तिको माध्यकबाट नेपाली समाजको हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन । साझा विवेकशिल पार्टीले अहिले समाजमा जागरण ल्याने काम सुरु गरेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य, कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने मूल उदेश्य भित्रका मुख्य अभियान हुन् । रबीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको पार्टीले । नत बम पड्काउछ, न मान्छे मार्दै हिडेको छ । नत यो पार्टीले कल–कारखाना, बिद्यालय र नेपाल नै बन्द गराउछ । मात्र समाजमा चेतना र जागरणको खेती गरिरहेको छ ।
अन्त्यमाः समाज हाम्रो हो । यहाँ हामीले नै केहि गर्नुपर्छ । ओली, प्रचण्ड र देउवा त राज्यसत्ता उपभोगका निम्ती हुरी जरी आएका पात्र न हुन् । यीनीहरुको देश भन्दापनि आफ्नो नीजी जीवन बिलासी बनाउने चिन्ता हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो यात्रा शान्ति र समृद्धिको यात्रा हो । यो यात्रामा सबै–सबैको हातेमालोको अपेक्षा गर्दछौं । नेपालको जय होस् ।